Rasta Robot Ataovy zava-dehibe tsy hay hadinoina ny hetsika manaraka anao JEREO NY FAHAGANANA VOLA
Serivisy hetsika RobotikaKimroy Bailey2018-07-11T13:56:24-05:00
Omeo traikefa tsy azon'izy ireo hanadino ny serivisy KB Group Robotics Event Services. Fotoana misotro mofomamy kely amin'ny Rasta Robot. Hotsarovana miaraka amin'ny Accent Jamaikana mafana izy ireo ary ny robot dia mety hamaly fanontaniana na roa.
Dance Dance vondrona Robot
Asa fanaingoana Robot Mimic
5 Package Robot Rasta
Hamoaka ny fakantsary ary hita ao ny Media Media ao anatin'ny minitra vitsy. Ny vahiny dia hiresaka momba an'io hetsika io mandritra ny taona maro ho avy. Amin'izay fotoana izay, ny elany no notompoin'ny Robotic Arm. Miresaka momba ny futuristic!
Asio Drumstick ato amin'ny lovako azafady
Manomeza avo dimy 🙂
Baic Bionics Package
Arosoy ny mpitsidika anao
Mety tsara amin'ny lohahevitra futuristic. Ny Kimroy Bailey Group Robotics Event Services dia hanome solomaso laser izay mamirapiratra, mamiratra ny efitrano fandihizana ary azo antoka fa hanome ny vahininao ny vahininao.
Ny fiantraikan'ny Wow
Tsara ho an'ny fanamainty maivana izay mitovitovy amin'ny VIP VIP. Afaka mijery sy mijery ireo mpanamory robots ireo miaraka amin'ireo mpanamory jiro miloko maro loko.
Fonosain-jiro ny Drôna
Fitaovana feno amin'ny robot
Raiso amin'ny hetsika 2030 miaraka amin'ny fonosana feno ny Robot Suit. Ahoana ny momba ny akanjo robotic mangatsiatsiaka, mandeha, ary mihetsika. Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia hampifanaraka ary hanadino ny mpihaino anao ary hiantoka ny lohahevitry ny loha hevitrao.
Package suit Robot
Drôna Choreographed Drancing
Mifandraisa amin'ny ho avy
Ity seho dihy mifehy miaraka amin'ny drôna. Fisehoana fampisehoana mahafinaritra ho an'ny vahiny hifanerasera amin'ny teknolojia amin'ny ho avy.
Fandaharana fandefasana Drone